Algolia Tsvaga Plugin yeWordPress & WooCommerce neWPSOLR
musha » Algolia Tsvaga Plugin yeWordPress & WooCommerce
Iyo WordPress & WooCommerce
Algolia yekutsvaga plugin
WordPress & woocommerce yekutsvaga yakanyanya-kubhadhariswa nealgolia yekutsvaga API
WPSOLR kunyoreswa kunodiwa >>
Algolia kunyoreswa kunodiwa >>
WordPress ndeye mahara kurodha pasi >>
Tora WPSOLR Yako Yemahara Muedzo >>
1- Dhawunirodha yako WPSOLR plugin yemahara muedzo
2- Enda kuAlgolia kuti utore yako yemahara kana yakabhadharwa Algolia account
3- Unganidza yako Algolia account kuWPSOLR yekutsvaga plugin mumaminetsi
Algolia ndeye mahara yekusashandiswa kwekushambadzira, uye inodhura kwazvo kana uine zvinyorwa zvisingasviki 50K.
Kwe1 $ unogona kunongedza 1000 magwaro uye kufonera 1000 mibvunzo mwedzi wega. Algolia ichagadzirisa kutsvaga kwako mumashure-kumagumo, nepo WPSOLR ichitarisira kumberi-kumagumo nekubatanidzwa.
Mamwe data kutsvaga? Unogona ndiwedzere yenyu Algolia chipeto mumasekondi, kana chinja kuna Elasticsearch kana Solr (zvishoma hunyanzvi, asi zvinogona kukosha kana usiri kuda kuongorora).
Kwidza kwazvo kutsvaga kwako
Bvisa zvausingakwanisi zvose nokushandisa masimba simba Algolia. Nakidzwa magumo scalability uye semheni pasina nguva.
Nomuimbirwo kutsvaka wenyu Algolia account. Semuyenzaniso, wedzera anoreva zvakafanana kana mutauro chaiwo.
Kana kungo farira iyo Algolia kutsvaka analytics kuziva izvo vashanyi vako vari kutsvaga.
No vanofanira kuva waishandiswa muuki. Imi muri the clicks mashomanana kubva rakazara itsva kutsvaka ruzivo.
Sarudza mutauro pakati 60+ mitauro yakapihwa naAlgolia, uye gadzirisa yako queries kubva kuAlgolia's account dashibhodhi (typo, fuzzy, tsika kugaya…)
Kopa yako Algolia application ID uye kiyi yekuchengetedza. Ndizvo.
Iyo plugin inotarisira kupindirana neAlgolia PHP API mutengi uye inogadzirisa iyo indexing uye kubvunza pfungwa.
Algolia mitengo: Algolia yakawanda zvakadii inodhura chaizvo?
Algolia mitengo muna Kukadzi 2021
Algolia iri SaaS yakapihwa sevhisi API, mitengo yayo ndeye 100% zvichibva pakushandiswa kwebasa ravo.
Yeuka, Algolia ndeye API, uye nekudaro iwe uchafanirwa kubhadhara chero chaungaite nacho. Kusanganisira kunongedza, kubvunza, kana kutowana kuwanda.
Algolia mitengo yakachinja zvakanyanya mukati memakore mashoma apfuura, uye kunyangwe kana vakasarudza kuve pachena uye nyore kufungidzira, kuchine mimwe misungo inosara iyo inogona kuve kushamisika kwakashata pakupera kwemwedzi.
Mitengo inoenderana nezvinonzi "UNITS“. "UNIT" inogona kusununguka.
1 UNIT = 1,000 XNUMX zvikumbiro zvekutsvaga UYE KUSANGANISIRA KUSANGANISIRA KUSVIRA KUKURU ZVINYAYA.
Ziva kuti indexing inotorwa pane yako UNIT queries quota: kana iwe uine chiuru marekodhi, uye wozvinyorazve zuva rega rega, iwe uchadya 1,000 unit zuva rega rega.
Zvakare, ona izvozvo kurongedza naAlgolia inodhura kwazvo, sezvo mhando dzese dzemhando dziri kuumbiridza indekisi yako huru mune nyowani yakagadziridzwa index. Naizvozvo, kana iwe ukaronga nemutengo uchikwira uye mutengo uchidzika, iwe unoshandisa 1 UNIT yeyako indekisi huru, uye maviri mamwe mauniti kune ako maviri akawedzera akaumbwa indekisi.
Asi zvadaro, Algolia inokoshesa mutengo wayo?
Mhinduro yacho inoenderana nezvako zvechokwadi.
Kana bhizinesi rako richida kutsvaga kwekutanga kirasi, ine typo shiviriro mumitauro makumi matanhatu, ipapo Algolia inopa izvozvi kunze kwebhokisi. Izvi zvinonyanya kukosha kana iwe usina data rakawanda kunongedza kakawanda, rega uti kusvika kumagwaro e60K. Padanho iri, Algolia haisi yakanaka chete, asi inogona zvakare kunge isingadhuri pane mamwe akapusa Elasticsearch kana Solr zvirongwa, zvine mukana we "kugadzirira kushandisa" zveshuwa. Izvi ichokwadi zvekuti takafunga kushandisa Algolia pano, pa wpsolr.com, panzvimbo yeElasticsearch. Iko kunaka kwemazano kwakanaka kwazvo, uye Algolia haina mari yakawanda zvachose kune edu mashoma zviuru zvemaposi uye maforamu misoro.
Kana iwe uine WooCommerce ine zvigadzirwa zve500K, Algolia inodhura. Asi zvinogona kuramba zvichikosha mutengo, zvichienderana nekuti kutsvaga kwako kunobatsira sei kubhizinesi rako.
"Ultra inokurumidza", "Super nyore kuita" uye "Nyore, nekukurumidza uye yakakodzera kuisirwa" ndizvo zvinhu zvakakosha izvo vanogadzira vanofunga nezveAlgolia; nepo "Powerful API", "Yakanaka Tsvaga Injini" uye "Vhura Sosi" ndizvo zvikonzero zvikuru Elasticsearch kana Solr inofarirwa.
Kunze kwebhokisi zvinoenderana: Algolia anokunda
Elasticsearch (uye Solr), kana zvakanyanyisa injini yeLucene, chishandiso chikuru chekuongorora kukuru kwedata, asi zvinonetsa kwazvo kuwana kukosheswa kwazvo nazvo mukutsvaga kweWordPress.
Unogona kuyedza kuwedzera pfungwa pamusoro peElasticsearch kana kuyedza kugadzirisa mhedzisiro yemimwe mibvunzo, asi ibasa rinonetesa iro richiri kuda kugadziriswa.
Algolia kune rimwe divi inotarisa pane zvakanaka kwazvo zvine hushoma kugadzirisa. Kunyange isiri yakanakira ese kesi mashandisiro, inoita kuti inyatso kukodzera kutsvaga kweWordPress.
Vhura sosi: Solr anokunda
Algolia ibhokisi dema, software yavo ndeyekushambadzira uye hapana anoziva zviri pamutemo kuti injini yavo yakaita sei kumashure kwechiitiko.
Izvi hazviite kana zvichienzaniswa neApache Solr uye Elasticsearch, ese ari maviri Open sosi (zvichiteerana Apache-rezinesi uye SSPL rezinesi).
Iko kukanganisa kukuru kweyekudyara ndeyekuvharirwa-mukati kune mupi: chii chichaitika kana iwe usingakwanise kubhadhara zvekare kubhadhara sevhisi yeAlgolia?
Zvakanaka, pane nhau dzakanaka kwauri: WPSOLR inogona kukumhanyisa kutsvagisa kweWordPress nemajini matatu, zvinoreva kuti unogona kungoisa data rako muWPSOLR uye nekukurumidza shanduka kubva kuAlgolia uchienda kuElasticsearch kana Solr (kana imwe nzira kutenderera).
Ehe, iwe unosunungura iyo kunze kwebhokisi inoenderana neAlgolia, asi hapana chinokutadzisa iwe kugadzirisa yako nyowani indekisi kune zvaunofarira uye uswedere padyo kubva kuAlgolia mhando sezvaunoda.
Analytics: Algolia anokunda
Algolia yakanaka kwazvo isingasviki kana uchifunga nezvekupupura uye Analytics.
Kunze kwebhokisi, Algolia inopa kwete chete Analytics chirevo pane yako indexes uye mibvunzo, asiwo rega iwe uite pane yako mhedzisiro kuvandudza mhedzisiro yako. Semuenzaniso, iwe unogona kuwana kuti ndeipi mibvunzo isina zvibereko zvekudzivirira vashanyi bounce. Asi zvakare munhu anogona kuodha zvekare mhinduro dzekutsvaga nemubvunzo kuratidza zvimwe zvabuda pamusoro zvichibva nezvikonzero zvekupokana, sekushambadzira kana kutengesa kwakanyanya.
Algolia analytic pfupiso
Algolia analytic yekutsvaga
Algolia analytic yekutsvaga isina mhedzisiro
Algolia analytic mafirita
Panyaya iyi, Apache Solr haapi zvachose.
Uye Elasticsearch inopa akanaka kwazvo maturusi ekuzivisa, asi kazhinji anotungamirwa kune akawanda-mativi ongororo, senge dhata-rekuchengetedza matanda ekutsvaga mapatani. Tsvaga analytics yakanyanya kusara isina chinhu.
NLP (Natural mutauro kugadzirisa): Algolia ine makumi manomwe mitauro OOTB
Chinyorwa chemitauro yakatsigirwa nemitauro yavo yakabatana ISO kodhi
ChiArabic = ar
ChiBulgaria = bg
ChiBangali = bn
ChiCatalan = ca
ChiGerman = de
ChiGiriki = el
Chirungu = en
ChiSpanish = es
ChiEstonia = et
Persian (ChiFarsi) = fa
ChiFinnish = fi
ChiFaroese = fo
ChiFrench = fr
ChiIrish = ga
ChiGalician = gl
ChiHebheru = iye
Hindi = mhoro
ChiHungary = hu
ChiArmenian = hy
ChiIcelandic = is
ChiItaly = icho
ChiJapanese = ja
ChiGeorgian = ka
ChiLithuania = lt
ChiLatvia = lv
Mongolian = mn
ChiMarathi = mr
ChiMalay = ms
ChiMarita = mt
ChiNorway Bokmål = nb
ChiDutch = nl
ChiNorway = kwete
Sotho yekuchamhembe = ns
ChiPolish = pl
Chiputukezi = pt
ChiBrazil = pt-br
ChiRomania = ro
ChiRussian = ru
ChiAlbania = sq
ChiSweden = sv
ChiSwahili = sw
ChiThai = th
ChiTagalog = tl
ChiTatar = tt
ChiChinese = zh
Tonga zvako Algolia indexes
Gadzira uye bvisa zvinyorwa pamwe nekukosha kumwechete.
Isa otomatiki indekisi yekumisikidza, mativi, yakatsvaga minda uye marongero.
Nekutadza, iyo yekuongorora yechirungu inogadziriswa.
Tune Algolia indexes, chete kana iwe uchida
Unganidza kune yako Algolia admin dashibhodhi kuti uchengetedze kutsvaga kwako
Gadza ako mitauro, zvirevo, misa mazwi, typos.
Sarudza yako data
Sarudza mhando dzekutumira, taxonomies, uye tsika tsika kutsvaga.
Tonga zvimiro zvemitambo yetsika, uye zvikanganiso zvekushandura.
Sarudza pakati pezvinyorwa zvakati wandei.
Inobatsira kune mitauro yakawanda, kana kuyedza.
Dzvanya pane bhatani rimwe kuti index, re-index, kana kudzima data rako.
Sarudza Kuwedzera kana kuzere reindexing.
Index mune chaiyo-nguva, kana kwete.
Index nemabatch, uye sarudza batch saizi.
Ratidza kudzikisira ruzivo rwekugadzirisa.
Sarudza mhando dzekutumira uye taxonomies kuti index, re-index, kana kudzima.